သငျသညျမှုအနိမျ့သုက်ပိုးအရေအတွက်သို့မဟုတ် ED ဖို့ Gene ရေကူးကန်ထွက်ပါမည်ပါသလား? (2011) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သို့သော်ဤအကြံဥာဏ်ကိုဇီဝဗေဒပညာရှင်များထံမှအထောက်အပံ့မပေးပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။ Amazon နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကကျွန်တော်တို့ကိုစွဲလမ်းစေခဲ့တယ် မျောက်လိင်နှင့်မိတ်လိုက်၏ဖြစ်ရပ်မှန်များ။ ဖိုရမ်များအမျိုးမျိုးအပေါ်ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေကနေဒီစကားစစ်ထိုးပွဲနှင့် Self-အစီရင်ခံစာများကိုစံသုတ်ရည်လွှတ်အကြံဉာဏ်ကိုမေးခွန်းထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားသော်လည်း၊ သူတို့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်မကြိုးစားနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏မယားများကိုညစ်ညမ်းစွာအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်မိမိတို့ကြားသိခဲ့ရသည့်အမျိုးသားများအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ (စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ဒါကလူ ဦး ရေထိန်းချုပ်မှုအတွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတိုင်းကို iPhone တစ်ခုစီနဲ့မိန်းမတိုင်းကိုတုန်ခါစေရုံသာဖြစ်သည်။ )
စံသုတ်ရည်လွှတ်အကွံဉာဏျ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်း, သေချာပေါက်မရည်ရွယ်သော်လည်းရလဒ်များစွာကိုလူပျိုကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ယုံကြည်ကြောင်း မဟုတ် အလွန်မကြာခဏ-အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့ ejaculate ရန်။ (အမှန်စင်စစ်အာဏာပိုင်များအတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နှင့် စပိန် တက်ကြွစွာကျောင်းများ၌ဤအယူအဆပျံ့နှံ့ဖို့မဲဆွယ်ကြပါပြီ။ ) အတော်များများယောက်ျားတွေတစ်ချိန်ကကျန်းမာလျှင် 2,3သို့မဟုတ်4ကြိမ်ပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရမည်ယုံကြည်ကြသည်။
အသက် ၃၀ အောက်လူငယ်များတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်တစ်နေ့လျှင်သုတ်ရည်လေးခုသည်တကယ်ကျန်းမာလျှင်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအစီအစဉ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အမှန်မှာ၊ သူတို့၏အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သော်ငြားလည်းယောက်ျားများသည်ယနေ့ထက်မြက်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (Internet porn, cam-4-cam, sex toys) သည်သန္ဓေသားလောင်း၏သန္ဓေသားလောင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်။
ယခုလူများစွာသည်အသက် ၂၀ အထိစောစောစီးစီးသုတ်ရည်လွှတ်မှုအကြောင်းညည်းညူနေကြပြီး၊ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သော fetish porn ကြယ်ပွင့်ကဲ့သို့မလုပ်ဆောင်၊ မပြုမူသောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့မရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ဒနှင့်အိမ်ရှင် သည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများ။ (သူတို့လစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက် porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုရပ်တန့်သည့်အခါအံ့သြ, သူတို့သတင်းပို့ သိသိသာသာတိုးတက်မှုများ ယုံကြည်စိတ်ချမှု, ခံစားချက်, အာရုံစူးစိုက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဗေဒနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်။ )
အကယ်၍ သင်သည်မလိုလားအပ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုသတိပြုမိပြီးသင်၏ဗီဇများကိုဖြုတ်ချရန်သင်မသေချာပါက၊ အောက်ပါဇီဝဗေဒနှင့်မနုropဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစဉ်းစားပါ။
တောင်မှအနောက်တိုင်းအထီးသော်လည်းပုံ အခြားမည်သည့်မျိုးစိတ်ထက်ပိုအထွတ်အထိပ်မှ masturbateလူသားများ, တကယ်တော့, တီထွင်ခဲ့တယ်သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့တည်ကြသည်မဟုတ်။ အဆိုအရ ကရာ စာရေးဆရာက Tim Birkhead:
လူ့သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းသည်အခြားမည်သည့်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါထက်မဆိုပိုမိုနိမ့်သည်။ epididymis ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့သုက်ပိုးအရေအတွက်လည်းနည်းတယ်။ အမျိုးသားများမှာချင်ပန်ဇီမျောက်များနှင့်မတူဘဲစွမ်းဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း ၂၄ နာရီအတွင်းသန္ဓေတားဆေးခြောက်လုံးသည် epididymal သုက်ပိုးစတိုးဆိုင်များကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်ရန်လုံလောက်သည်။ [စစ။ 82,84]
ကနေတဆင့်စုဆောင်းသုက်ပိုး နေ့စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ တစ်နေ့နှစ်ခုအပေါ်သန်း 150 ဖို့, နေ့သုံးရက်တွင်သန်း 80 ဖို့, နေ့တဦးတည်းအပေါ် 47 သန်းကနေကျဆင်းသွားသည်။ ဒါဟာခန့်ကြာ 64 ရက်ပတ်လုံး သုက်ပိုးရင့်ကျက်ဖို့ပါ။
ကိန်းဂဏန်းများလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်ဆက်ဆက်လူတို့၏စပ်ကြားကွဲပြားနေချိန်တွင်လူသားတစ်ဝှမ်း 100 သန်း၏တစ်ဦးသုက်ပိုးအရေအတွက်များသောအားဖြင့် fertilization တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်အခွင့်အလမ်းများအတွက်လိုအပ်သောသွင်းစဉ်းစားကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦးအနိမ့်သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမှာရှိသည်။ ဒါဟာမကြာခဏသုက်လွှတ်နာတာရှည်လျော့ကျဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်ကလေးမွေးဖွားလျော့နည်းသွားနိုင်ကြောင်းကိုဘယ်လိုလေ့ကြည့်ဖို့ရိုးရှင်းပါသည်။
သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသည်ကွဲပြားသော်လည်းတတိယနေ့တွင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်သုက်ပိုးထောက်ပံ့မှုကိုအလွန်အကျွံမရရှိနိုင်ကြောင်း (သူတို့မကြာခဏသုတ်သင်ခြင်းပြီးနောက်ပုံမှန်ဖြစ်သွားသည်ဟုယူဆရသည်) ။ တတိယမြောက်နေ့၌သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်စွမ်းရည်ရှိသောသုက်ပိုးများဖြင့်ပေါင်းသင်းနိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သုက်ပိုးများစွာသည်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကိုများစေနိုင်သည်။ “ ထုတ်ပစ်!”
'' ငါကချိုသာတယ်ဆိုရင်ငါဆိုလိုတာ '' လိုအပ်ချက် သုက်ရန်။ '
မဟုတ်သေချာပေါက်။ လူ့သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များမှအနိမ့်ဆွေမျိုးသော်လည်း, ဆဲဖြစ်လာလူ့ယောက်ျားမခွဲခြားဘဲသုတ်ရည်သိုက်အလားအလာမျိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းများကိုတုံ့ပြန်နှိုးဆော်ခြင်း (ထို Coolidge Effect) ။ ဤအဖြစ်မှန်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးချနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
လိင်နှင့်အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်ဝင်ရောက်ဖို့အန္တရာယ်ဘဝတွေကိုရန်စိတ်အားထက်သန်ဘို့အထီးဇွဲထက်သန်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဓာတ်မြေသြဇာများအတွက်ရုန်းကန်ပုံမှန်အားတောင်းဆိုနှင့်ပျက်ကွက်ဘုံကြောင့်အားလုံးပြီးနောက်, အထီးကျားပိုပြီးမကြာခဏသုညအမျိုးအနွယ်၏အလားအလာရင်ဆိုင်နေရသည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်သင်က“ မဟုတ်ဘူး” ဟုပြောရန်အခက်အခဲရှိရန်ကြီးမားသော libido သို့မဟုတ်ပုန်းရှောင်နေစရာမလိုပါ။ ကျန်းမာသောလူ့ ဦး နှောက်များသည်တန်ဖိုးရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာရောဂါများသို့မဟုတ်ဝတ္ထုအသစ်များကိုတုံ့ပြန်သည်။ သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သင်ဒီမှာမရှိဘူး။ တကယ်တော့၊ မင်းကလိင်ကိုအများဆုံးလိုချင်သူတွေရဲ့ထုတ်ကုန်ပဲ။
သို့သျောလညျးအဘယျသို့အဆမဲ့ simulated သောအခါအဖြစ်ပျက်များနှင့်လိင်နှိုးဆွဆိုက်ဘာစပေ့ကနေသုတ်ရည်အဘို့တောင်းစားကို virtual ဒီတခါကြားနေရ၏ပုံစံသည်ဤထက်သန်တဲ့ယောက်ျားမှမရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်?
သုတေသနတိရိစ္ဆာန်များသဘာဝတစျခုမှတစ်ဦး supernormal လှုံ့ဆော်မှုပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုပြသထားတယ်။ အမျိုးသမီးသောငှက်များမဟုတ်ဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစစ်အမှန်ကြက်ဥထက်ကွီးကွပျမှူးအင်္ဂတေကြက်ဥငှါလာကြသည်ကိုယောဟန်မှကြိုက်တတ်တဲ့။ တစ်ဦးကအထီးငါးကိုမှန်ကန်ကြက်ဥနှင့်အတူတကယ့်အမျိုးသမီးထက်သစ်သားအဆမတန်ကြီးမားအမျိုးသမီး (ပိုကြီးအရွယ်အစား = ပိုပြီးကြက်ဥ) တရားရုံးကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ လူသားကိုအလွယ်တကူသူတို့အလားအလာမျိုးပွားနိုင်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူစစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ဖက်၏အစားအွန်လိုင်း charmers superstimulating ဘို့လဲကျနိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လေ့လာခြင်းအထူးပြုတဲ့သူတစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်-ဇီဝဗေဒပညာရှင်မိတ်ဆွေတစ်, မှတ်ချက်ချ:
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ porn လိင်အစစ်အမှန်လိင်ဆင်းရဲသောအခြားရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ်ပင်မဖြစ်နိုင်စေမည်သောအလားအလာကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်မနိုင်လျှင်လည်းအစစ်အမှန်လိင် ပို. ပင်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲသားအခြားရွေးချယ်စရာ-နှင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်း vibrators ရှိသည်။
ငါနီးပါး porn ဖို့ဒါမှမဟုတ်လိင်ကစားစရာတွေနဲ့ masturbating, ယောက်ျားမိန်းမတို့သီးခြားစီအသက်ရှင်လိမ့်မည်သည့်အတွက်အနာဂတ်တည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်နိုင်ပါတယ်။ အလိုရှိသောအခါ, မျိုးပွား, baster-ယူဆကွန်ပျူတာ-စာမတတ်သူအလှူရှင်များတွေ့နိုင်ပါသည်တစ်ကြက်ဆင်နှင့်အတူပြုမိပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တောင်မှသူ၏လိင် drive ကိုမျိုးသုဉ်းရန်သူ့ဟာသူ masturbating ဖို့ကဦးဆောင်ပထမဦးဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟားဟား
ရယ်စရာကောင်းသောနှင့်သေးတစ်ဦး မကြာသေးခင်ကဗြိတိန်စစ်တမ်း သူတို့တွင်ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်းကိုအနည်းဆုံး 10 နာရီတစ်ပတ်ခြောက်ဆယ်တဦးတည်းအဘို့အညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေကြောင်းအစီရင်ခံကြောင့် (အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူများနှင့်အလင်းအသုံးပြုသူရာခိုင်နှုန်း 27 ရာခိုင်နှုန်း 24 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်၌သင်တို့ကိုလျော့နည်းစိတ်ဝင်စားစေနိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကုန်ခမ်းတော့မှာသုတ်ရည်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလူ့-အထီးကလေးမွေးဖွားမှုအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရှည်လျားတည်မြဲဂယက်ရိုက်ရှိစေခြင်းငှါသင်ယူဖို့တုန်လှုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားဆယ်ရက်ကျော် 2.4 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ejaculated ဘယ်မှာလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့သူတို့ရဲ့သုက်ပိုး output ကိုများအတွက် Pre-လျော့ကျအဆင့်ဆင့်ကိုအောက်တွင်ရှိနေဆဲ ကျော်ကိုငါးလ.
super-enticing လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သည့်ပလတ်စတစ် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကြာရှည်ခံနိုင်သောအန္တရာယ်လည်းရှိသည်။ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်လူတစ် ဦး ၏အာရုံကိုထိခိုက်စေနိုင်သည် အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု ပြီးတော့သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိပဲထားခဲ့ပါ။ အဝလွန်သူတစ် ဦး ဟာသူရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်အစီအစဉ်မှာ“ More!” လို့ကြွေးကြော်နေလို့အဝလွန်သူတစ်ယောက်ဟာချစ်ပ်တွေကို ၀ ယ်နေဆဲ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က“ လုံလောက်ပြီ” ဟုအော်ဟစ်နေသကဲ့သို့ပင်
ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေခြင်းကယနေ့မကြာခဏသုက်ပိုးများလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည် မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အဆိုအရတကယ်တော့“ သူတို့အလုံအလောက်ရှိရင်ရပ်ပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ရှာဖွေခြင်းသည်အသုံးပြုသူများအကြားမထူးဆန်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာနာတာရှည်သုက်ပိုးများကွယ်ပျောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့အများအပြားလိင်-အပြုသဘောယဉ်ကျေးမှုထောင်စုနှစ်များအတွက်ဖြည့်ညှင်းသွန်သင်ပြီ။ ကရှင်းပြသည်သကဲ့သို့လူများဖြစ်ပြောင်းလဲကြပြီမဟုတ် တတ်နိုင် ဇီဝကမ္မဂယက်ရိုက်ခံစားနေရပြီးမရှိဘဲအဆမဲ့လိင်ရှိသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, အထီးလုပ်ရပ်တွေဟာဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်ရှားပါးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများအဖြစ်မှန်အားဖြင့်စစ်ဆေးမှုများကျင်းပခဲ့သည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းမှုမြင့်တက်လာသောအခါနောက်ပိုင်း, အထီးအာနိသင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုလျှံစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းအစဉ်အလာအားဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။
အမှန်မှာ၊ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်ဝက်၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ကိုပယ်ချရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းနှင့်နှစ်ထောင်ချီ။ လူသားများသည်အထီး၏စွမ်းအားနှင့်တက်ကြွမှုကိုကာကွယ်ရန်အစဉ်အလာများနှင့်မညီမညာဖြစ်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဥပမာတရုတ်ရှေးခေတ် Daoists တွေကသိပ္ပံပညာကိုလိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုသဟဇာတဖြစ်စေခဲ့သည်။
သူတို့ကတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကမနုropဗေဒပညာရှင်အေ။ အဲန်နက်စ်ခရောလီကယဉ်ကျေးမှုပေါ် မူတည်၍ ယဉ်ကျေးမှုပေါ် မူတည်၍ ယဉ်ကျေးမှုပေါ် မူတည်၍ လိင်မှုကိစ္စအားခေတ္တရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူမျိုးစုယဉ်ကျေးမှုများယုံကြည်သည်ဟုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်အမဲလိုက်ခြင်း၊ စစ်ဆင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ စပျစ်ရည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထိုကဲ့သို့သောအကြံဥာဏ်များသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာရှိခဲ့သောကြောင့်ခရောသည်ယာယီကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်မှုကို“ အရေးကြီးသောဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အရေးပါသောနေရာများအတွက်မမှားနိုင်သော nostrum” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
periodic abstinence အထီးဘယျသူမှမအောငျနှင့်သန်စွမ်းတိုးမြှင့်ဖို့ယုံကြည်သည်ခဲ့သည်။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်မြောက်မြားစွာယဉ်ကျေးမှုလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပါပြီ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအောင်၏နည်းလမ်းများ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆန္ဒရှိနေသည်မဟုတ်လျှင်) ထိုမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံပေမယ့်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောသုတ်ရည်လွှတ်တိုက်တွန်းပါသည်။
ပိုများသောမကြာသေးမီက, ဗဟိုအာဖရိကမှာယဉ်ကျေးမှုလေ့လာနေမနုဿဗေဒပညာရှင်ဟာ Aka နှင့် Ngandu လူမျိုးကြောင်းအစီရင်ခံ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေမနေပါနဲ့။ ဤယဉ်ကျေးမှုများသည်ကလေးမွေးဖွားခြင်းမှသည်လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်အထိလိင်ဆိုင်ရာဆိုင်းငံ့ထားခြင်းကိုရိုးရာအစဉ်အလာအရလိုက်နာသည်။ လိင်နှစ်မျိုးလုံး၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုသိသာထင်ရှားသော်လည်းအမျိုးသားများမကြာခဏသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ (ဒီထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကိုဘာသာရေးသာသနာပြုတစ်ယောက်မှမလွှမ်းမိုးခဲ့ပါဘူး။ )
'သဘာ ၀' / ဘိုးဘွားအပြုအမူအချို့ကိုနေ့စဉ်သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အားပေးခြင်းသည်မှားယွင်းသည်။ All-In-All သက်သေအထောက်အထားများအရလူများ၏သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုသည်အလယ်အလတ်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းမှုနှုန်းထက်မကတိုးတက်သေးသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နေ့စဉ်ပုံမှန်အတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကန့်အသတ်မရှိသောလူသား၏သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်သည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားများအတွက်, မျိုးပွားမသေချာမရေရာသည်။ ၎င်းသည်လိင်အပျော်အပါး၏ပြင်းထန်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားမကြာခဏသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည်၎င်းထက် ပို၍ အကျိုးရှိမည်ဟုယူဆစေသည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှားဘာမှမရှိဘူး Alhthough ကမီဒီယာများကမွှမ်းတင်ကနျြးမာရေး panacea မည်မဟုတ်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏မော်ကွန်းကနေ - တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Psychopathology နှင့် Prostate အလုပ်မဖြစ်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်: Quinsey အပေါ် (2012) Comment
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် - အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
မှတ်စု: YBOP သင်တို့အဘို့ဆိုးရွားကြောင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုမပေးပါ။ ကိုယ့်ဒါခေါ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ၏များစွာသောအမှတ်အောင် ပြောဆိုထားသည် အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့တကယ်တော့အခြားလူသားမဟုတျဘဲအော်ဂဇင် / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ပိုများသောအထူးအနည်းငယ်အထီးကျန်ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်အော်ဂဇင် (မှန်လျှင်) အကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်ကောင်းသဘာဝကျကျပိုပြီးလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကျန်းမာသန်စွမ်းလူဦးရေကနေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ပြောဆိုထားသည်။ သူတို့ကကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်။ သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ:
ကွဲပြားခြားနားသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ (2010) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဟုတ်ခဲ့စဉ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း, အပြုသဘောသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအဆိုးဆက်စပ်ခဲ့ - ကိုပိုမိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆင်းရဲတဲ့ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းအဓိပ္ပာယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံး:
"နည်းစနစ်နမူနာများနှင့်အစီအမံများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအပျေါမှာအခြေခံပြီး, သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကိုတဦးတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (penile-vaginal လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ရန် orgasm တုံ့ပြန်မှု) နဲ့ဆက်စပ်နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ဆက်နွယ်ဖြစ်စဉ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းသရုပ်ပြအတွက်သိသိသာသာတသမတ်တည်းများမှာ ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူ။ "
"(penile-vaginal လိင်ဆက်ဆံမှုကွာ penile-အင်္ဂါဇာတ်အာရုံထဲကနေကွန်ဒုံးသို့မဟုတ်အာရုံနှင့်ဝသကဲ့သို့, ချို့ယွင်းအခါအပါအဝင်) အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို unassociated ဖြစ်ကြောင်း, သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံကဲ့သို့) အချို့ကိစ္စများတွင်ပြောင်းပြန်ပိုကောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဆက်စပ် ။ "
"လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ, လိင်ပညာရေး, လိင်ကုထုံးနှင့်လိင်သုတေသနအထူးသ penile-vaginal လိင်ဆက်ဆံမှု၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအသေးစိတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း, လည်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအလေ့အကျင့်အတွက်အများကြီးပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။ "
ဒါ့အပြင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်း၏ဤတိုတောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Psychopathology နှင့် Prostate အလုပ်မဖြစ်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်: Quinsey အပေါ် (2012) Comment
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနှစ် ဦး စလုံးလိင်နှစ်မျိုးစလုံးတွင်တွေ့ရှိမှုများနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟူသောထင်မြင်ချက်ကိုပြန်လည်ပေါင်းစပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ပိုမိုစိတ်ဓာတ်ကျစေသည့်လက္ခဏာများနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည် (Cyranowski et al, 2004; Frohlich & Meston, 2002; Husted & Edwards, 1976), ပျော်ရွှင်မှုလျော့နည်းခြင်း (Das စိတ်ရောဂါကာကွယ်ရေးယန္တရားများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်သွေးပေါင်ချိန်ဓာတ်တိုးခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မကျေနပ်မှုများပါ ၀ င်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွန်းကိန်းများ (Costa & Brody, 2007)၊ သုံးသပ်မှုအတွက် Brody, 2011 ကိုကြည့်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်စိတ်ကိုမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးစေကြောင်းကြည့်ရှုရန်တူညီစွာပင်ခက်ခဲသည်။ ပို၍ ကြီးသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းသည်အမျိုးသားများရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်လေ့ရှိသောအခါ (Brody & Costa, 2010; Das, Parish, & Laumann, 2009; Gerressu, Mercer, Graham, Wellings, & ဂျွန်ဆင်, 2009; Lau, Wang, Cheng, & Yang, 2008; Nutter & Condron, 2005) နှင့်အမျိုးသမီးများ (Brody & Costa, 1985; Das et al, 2009; Gerressu et al ။ , 2009; Lau, Cheng, Wang, & Yang, 2008; Shaeer, Shaeer, & Shaeer, 2006; Weiss & Brody, 2012) ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းသည်မိတ်ဖက်များကိုမကျေနပ်မှုများနှင့်မိတ်ဖက်များအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလျော့နည်းခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်သည် (Brody, 2009; Brody & Costa, 2010) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် PVI သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုတသမတ်တည်းဆက်စပ်သည် (Brody, 2009; Brody & Costa, 2010; Brody & Weiss, 2009; Costa & Brody, 2011, 2011), ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု (Brody & Costa, 2012; Brody & Weiss, 2009; Nutter & Condron, 2011, 1983; Weiss & Brody, 1985) နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး (Brody, 2009; Brody & Costa, 2010; Brody & Weiss, 2009) ။
ထိုမှတပါး, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာပေမယ့်ဒီထက်အန္တရာယ် (အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သတ်မှတ်ချက်မပါဘဲ) သုက်ပိုမိုအရေအတွက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (Giles et al ။ , 2003) [ကွဲလွဲနေသောသက်သေအထောက်အထားကိုသတိပြုပါ -ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလိင်ဟော်မုန်းချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါသူတို့ 20s နှင့် 30s ပိုမိုလိင်တက်ကြွနေသောအမျိုးသားများဆီးကျိတ်ကင်ဆာတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ် run စေခြင်းငှါ, သုတေသနအကြံပြု။ "], ၎င်းသည်အန္တရာယ်လျှော့ချရေးနှင့်အထူးဆက်စပ်သော PVI ကြိမ်နှုန်းဖြစ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် (ထိုအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် Brody, 2010 တွင်ကြည့်ပါ) ။ ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းသည်ဆီးကျိတ်၏အခြားပြproblemsနာများ (ပိုမိုမြင့်မားသောဆီးကျိတ်ကင်ဆာအဆင့်အမြင့်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်နူးညံ့သောဆီးကျိတ်) နှင့်လည်းဆက်စပ်ကြောင်းသတိပြုရန်မှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ PVI မှရရှိသောသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရရှိသောသုက်လွှတ်မှုသည် ဆင်းရဲသောဆီးကြိတ်လုပ်ငန်းနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်း (Brody, 2010) ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သောတစ်ခုတည်းသောလိင်အပြုအမူသည် PVI ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပိုမိုဆင်းရဲသောကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်နွယ်သည် (Brody, 2010; Brody & Costa, 2009; Brody & Weiss, 2011; Costa & Brody, 2011, 2012) ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒယန္တရားများစွာရှိသည်။ သဘာဝရွေးချယ်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုမျက်နှာသာပေးသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်အဖြစ် PVI ကိုရရှိရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်စွမ်းရည်ရရှိခြင်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာအကျိုးပြုသည့်စိတ်ဓာတ်ရေးရာဆိုင်ရာယန္တရားများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် PVI မှကာကွယ်မှုကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ကြံ့ခိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ (Brody, 2010) ။ ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်နွယ်မှုတို့၏ယန္တရားအချို့ကိုပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြသည်၊ သို့သော်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်း၎င်းသည် PVI ကိုလက်လှမ်းမီခြင်းနှင့်အတူတကွတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပို၍ ကြီးသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကြိမ်နှုန်းသည် PVI အကြိမ်ရေ (Brody & Costa, 2009) နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲဘဝ၏ကဏ္ aspects အတော်များများနှင့်မကျေနပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး PVI ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျော့နည်းသွားစေသည်ဟုမှတ်သားထိုက်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ PDF ကိုတွေ့မြင် - လူမှုရေး, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူငယ်လူရွယ် (2014) အနက်လတ်တလောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပုံစံများအတွက် Relational ကွဲပြား
“ ဒါကြောင့်မကြာသေးမီကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့သူတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ရင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ပျော်ကြမလဲ ပုံ (၅) တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာယနေ့ခေတ်သူတို့၏ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍“ အလွန်မပျော်မရွှင်” ဖြစ်ခဲ့ကြသောဖြေကြားသူများအနက် ၆၈ ရာနှုန်းသောအမျိုးသားနှင့် ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်လွန်ခဲ့သောအပတ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ မပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကျိုးနွံစွာပေါင်းသင်းခြင်းသည်အမျိုးသားများကြားတွင်တန်းတူညီမျှဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသမီးများမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လူတို့အားမပျော်စေကြောင်းဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အချက်အလက်များ၏အပြန်အလှန်သဘာ ၀ ကျသောသဘောသဘာဝကကျွန်ုပ်တို့အားဤအကဲဖြတ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်ပျော်ရွှင်သည်ဟုဆိုကြသောအမျိုးသားများသည်မပျော်မရွှင်သောယောက်ျားများထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအစီရင်ခံရန်နည်းနည်းပင်နည်းသည်ဟုဆိုခြင်းသည်လက်တွေ့ကျမှန်ကန်မှုရှိသည်။
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အရည်အချင်းမရှိဟုခံစားရခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးတွင်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်နှင့်အတိတ်သီတင်းပတ်များကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအစီရင်ခံခြင်းမရှိသောဖြေဆိုသူများထက်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်နှင့်အတိတ်ရက်သတ္တပတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများသည်အလွန်အမင်းဆက်ဆံမှုကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုစကေးရမှတ်များပြသသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်နှင့်အတိတ်သီတင်းပတ်များကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအစီရင်ခံခြင်းမရှိသောဖြေဆိုသူများထက်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်နှင့်အတိတ်ကာလတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူများသည်ဆက်ဆံရေး၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုပမာဏသိသိသာသာမြင့်မားသည်။ ”